Apple manova ny iOS 14.2 miaraka amin'ny kinova izay manampy fanovana ho an'ireo izay tsy nanavao | Vaovao IPhone
Apple dia manova ny iOS 14.2 miaraka amin'ny kinova izay manampy fanovana ho an'ireo izay tsy nanavao
Olana iray mihoatra ny olana voafaritra ao amin'ny kinova ofisialy natomboka herinandro vitsivitsy lasa izay nataon'i Apple tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny mpampiasa rehetra nahatonga ny orinasa tsy maintsy nandefa kinova vaovao izay mbola tsy nohavaozina tamin'ity fotoana ity. Amin'ity tranga ity, dia kinova izay tsy misy fiovana hita maso na fiasa raha ampitahaina amin'ny 14.2 navoaka tamin'ny fiandohan'ny volana, dia toa olana manokana namboarin'izy ireo ho an'ireo izay tsy nametraka ity kinova ity, ka tsy bibikely izay misy fiatraikany amin'ireo mpampiasa efa manana ny kinova farany azo apetraka.
Zahao raha mila manavao ianao
Amin'io lafiny io ny kinova vaovao dia 18B111 ary ny teo aloha dia 18B92, koa io fanovana ny fananganana io dia manondro mazava tsara fa nanavao izy ireo. Mba hijerena raha toa ianao ka ao amin'ny kinova farany misy, dia mila miditra amin'ny sehatry ny setting> General> fanavaozana ny lozisialy ianao ary eo no hamaritana raha mila manavao ianao na tsia. Raha ho ahy manokana dia tsy misy kinova vaovao azo ato amin'ity fizarana ity ka tsy mila manao na inona na inona aho.
Apple dia nanisy fanovana maro tamin'ity kinova iOS vaovao ity ary toa tena mandeha tsara izy ireo ka heverinay fa ny tsy fahombiazana dia tokony hapetraka amin'ny fametrahana ilay kinova amin'ireo fitaovana. Na izany na tsy izany dia tsara ny manavao hatrany miaraka amin'i Apple, raha misy olana miseho amin'ny dikanteny misy anao dia fantatrao fa hanangana fanavaozana tsy ho ela izy ireo hamahana izany. Raha izany dia hetsika tsy mahazatra io, saingy tsy zavatra tsy nataon'izy ireo tamin'ny tranga hafa niaraka tamin'ny iOS taloha ihany koa izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 14 » Apple dia manova ny iOS 14.2 miaraka amin'ny kinova izay manampy fanovana ho an'ireo izay tsy nanavao
Apple dia mahatsapa ny olan'ny efijery amin'ny maodely iPhone 12 sasany